Travel – Page2– Trend.com.mm
လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ရဲ့ဟန်းနီးမွန်းခရီးစဉ်ကိုသာယာ လှပပြီးအေးချမ်းတဲ့နေရာလေးတွေမှာ ကုန်ဆုံးချင်ကြပါတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို ဟန်နီးမွန်းထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာလေးတွေကို မပါမဖြစ်ထည့်စဉ်းစားပေးဖို့လိုတယ်နော်… 1. Tuscany, » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, TravelLeaveaComment on ယူတို့ချစ်ချစ်တွေနဲ့ Romantic ဆန်ဆန် Honeymoon သင့်တဲ့ကမ္ဘာတစ်လွှားကနေရာများ…
Black Knight ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့ Slovenia နိုင်ငံလေးကိုမှတ်မိကြသေးလား?ဥရောပနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Slovenia နိုင်ငံဟာ ရုပ်ရှင်ထဲမှာခဏလေးပါတာတောင် လှပလွန်းလုိ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, TravelLeaveaComment on Black Knight ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Slovenia နိုင်ငံရဲ့ ထူးခြားချက်လေးတွေ…
Legend of blue Sea ကိုရီးယားဇာတ်ကားရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ချို့ကိုစပိန်နိုင်ငံ၊ဘာစီလိုနာမြို့လေမှာသွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့တာပရိသတ်တွေလည်းသတိထားမိမှာပါ။ရှုခင်းတွေကလှပလွန်းလို့သွားချင်မိတယ်လို့တောင်ရေရွတ်ဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်လည်းဘာစီလိုနာရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုကိုမရုန်းထွက်နိုင်လို့ ဘာစီလိုနာမြို့လေးအကြောင်း စပ်စုကြည့်တဲ့အခါမှာ ဒီလိုထူးခြားချက်လေးတွေကိုတွေ့လာရပါတယ်။အတူတူဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, TravelLeaveaComment on Legend of blue Sea ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာမြို့လေးမှာ ဒီလိုထူးခြားချက်တွေရှိသတဲ့…
Posted on June 28, 2018 by Wint
အခုချိန်ကတော့ ကမ်းခြေသွားလို့မကောင်းသေးပေမယ့် လာမယ့်ခရီးသွားရာသီဆို အားလုံး ကိုယ်စီ သွားမယ့်နေရာလေးတွေကို စဉ်းစားနေကြမှာပါ။ ကမ်းခြေသွားမယ်လို့ စဉ်းစားထားရင် ပေါ့… » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, TravelLeaveaComment on ကမ်းခြေသွားကဲဖို့ အစီစဉ်ရှိတယ်ဆို ဒါလေးတွေတော့ လုပ်ကြည့်
သင်ဟာ Harry Potter ကိုကြည့်ဖူးသူဆိုရင် လန်ဒန်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Harry Potter Studio ကို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, TravelLeaveaComment on ဟယ်ရီပေါ်တာ ဇာတ်ကားထဲရောက်ရှိသွားသလို ခံစားစေရမယ့် ”Harry Potter World”
ပင်လယ်ကမ်းခြေလို့ပြောလိုက်ရင် မသွားချင်တဲ့သူဆိုတာမရှိလောက်အောင်လှပတဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။ကမ္ဘာအနှံ့မှာ လှပလွန်းတဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ကမ်းခြေတွေကြားကနေ ထူးထူးခြားခြားပန်းရောင်သမ်းနေတဲ့ကမ်းခြေတွေလည်း ရှိပါသတဲ့။မြင်နေကျ သဲသောင်ပြင်တွေလိုမဟုတ်ပဲရူးလောက်အောင် လှပလွန်းတဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, TravelLeaveaComment on ရူးလောက်အောင်လှပလွန်းတဲ့ ပန်းရောင်ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေဆိုတာ…
ဆန်တိုရီနီကျွန်းလို့ပြောလိုက်ရင် မသွားချင်တဲ့သူမရှိလောက်အောင်ရင်သပ်ရှုမော ဖွယ်ရာအလှအပတွေ နဲ့ဆွဲဆောင်ထားနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဆိုတာအားလုံးသိကြမှာပါ။ ဒီလို ဂရိကျွန်းဆွယ်တွေရဲ့ အလှဘုရင်မ ဆန်တိုရီနီကျွန်းကို နှစ်စဉ်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်ပေါင်း ၁.၅သန်းကျော်လည်ပတ်လေ့ရှိပါတယ်။ခရီးသွားရတာနှစ်သက်တဲ့သူတွေရဲ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, TravelLeaveaComment on ဂရိကျွန်းဆွယ်ရဲ့ အလှဘုရင်မ ဆန်တိုရီနီကျွန်းကို သွားလည်မယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေတော့သိထားဖို့လို
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လှပတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီိနိုင်ငံလေးကိုတွေ့ရင်တော့ သင်ချစ်မိသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်…. Slovenia နိုင်ငံလေးပါပဲ။ ထိုနေရာကိုသွားဖူးတဲ့ တော်တော်များများကလည်း » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, TravelLeaveaComment on အသက်ရှုမှားလောက်တဲ့ ရှုခင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Slovenia ရဲ့အလှ
ခရီးထွက်ပြီဆိုရင်ဖြင့် နေရာကောင်းကောင်းလေးမှာတည်းရဖို့လိုအပ်သလို ဓာတ်ပုံလှလှလေး ရိုက်လို့ရမယ့်နေရာမျိုးရွေးတတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါသေးတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးဆန်းဆန်းပြားပြား စိတ်လှုပ်ရှားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဟိုတယ်လေးတွေရှိတဲ့နေရာကိုသိထားဖို့လိုပါပြီ။တစ်ညတည်း တည်းရုံနဲ့ စွန့်စားခန်းခရီးထွက်ရသလို ခံစားချက်မျိုးပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့တောင် ခရီးသွား » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, TravelLeaveaComment on ခရီးသွားရင်း ချစ်စရာဟိုတယ်လေးတွေမှာတည်းကြမယ်
Disneyland မှာ ကိုယ်ငယ်ငယ်တည်းက အကျွမ်းတဝင်ရှိခဲ့တဲ့ ကာတွန်းဇာတ်ရုပ်လေးတွေ အဲ့ဒီမှာ အစုံလင်ရှိနေတာကြောင့်ရယ် ၊ သူ့မှာ ကာတွန်းကားတွေထဲမှာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, TravelLeaveaComment on ပဲရစ် Disneyland ဟာ လူကြီးတွေအတွက်လည်း ဘာကြောင့်ပျော်စရာကောင်းတာလဲ?